शुक्र गोचर अप्रिल २०२२: यी ३ राशिको जीवन प्रेम-पैसा-रोमान्सले भरिनेछ! धन्यबाद खुशीको उपहार दिनेछ ! - Mitho Khabar
April 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on शुक्र गोचर अप्रिल २०२२: यी ३ राशिको जीवन प्रेम-पैसा-रोमान्सले भरिनेछ! धन्यबाद खुशीको उपहार दिनेछ !
उज्यालो नेपाल ललितपुर ,
शुक्र राशि परिवर्तन अप्रिल २०२२: शुक्र ग्रह प्रेम, रोमान्स, खुशी, सौन्दर्यको कारक हो। जब ती राशि परिवर्तन हुन्छ, यसले सबै १२ राशिको जीवनका यी पक्षहरूमा राम्रो वा नराम्रो प्रभाव पार्छ। 27 अप्रिल 2022 मा शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गर्न गइरहेको छ। यसको प्रभाव सबै मानिसमा फरक फरक पर्नेछ। तर ३ राशी भएका व्यक्तिहरु छन्, जसमा शुक्रको राशि परिवर्तनको प्रभाव निकै शुभ रहनेछ । उनीहरुले प्रेम साथी पाउन सक्छन्, विवाह गर्न सक्छन् र धेरै धन प्राप्त हुने सम्भावना छ।
कुम्भ राशिमा शुक्र गोचर हुनेछ
अहिले शुक्र कुम्भ राशिमा शनिको राशिमा छ। उहाँले 27 अप्रिल 2022 मा मीन राशिमा ट्रान्जिट गर्नुहुनेछ। शुक्रको गोचर साँझ ६ः०६ बजे हुनेछ। यो गोचर ३ राशिका मानिसहरुका लागि निकै शुभ रहनेछ र उनीहरुको जीवनमा धेरै खुशी ल्याउनेछ ।
वृष (वृष) : शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तनले वृष राशिका लागि सुखद दिन ल्याउनेछ । उनीहरुको आम्दानी बढ्नेछ । धन लाभ हुनेछ । रोकिएको धन प्राप्त हुने प्रबल सम्भावना छ । यस बाहेक यो समय जागिर र व्यापारका लागि पनि राम्रो रहनेछ। मन लागेको काम पाउन सकिनेछ । पदोन्नति हुन सक्छ। व्यापारीहरूले राम्रो नाफा कमाउनेछन्। प्रेम साथी भेट्न सकिनेछ । विवाहित व्यक्तिहरुको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ ।
मिथुन (मिथुन): मिथुन राशिका लागि शुक्रको राशि परिवर्तनले धेरै उपहार ल्याउनेछ। यो समय करियरमा सुधार ल्याउनेछ। कार्यस्थलमा मान सम्मान मिल्नेछ । पदोन्नति पाउन सकिनेछ । पहिले गरेको मिहिनेतको फल पुरस्कारको रुपमा पाउन सकिन्छ । व्यवसायीलाई लाभ मिल्नेछ । विदेशबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ । विगतमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । जीवनमा रोमान्स बढ्नेछ, पार्टनरसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ।
कर्कट: शुक्र राशि कर्कट राशिका लागि भाग्यशाली साबित हुनेछ। सबै कुरामा सफलता मिल्नेछ । कार्यस्थलमा राम्रो वातावरण रहनेछ। पदोन्नति-वृद्धि वा कुनै पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना छ। लामो दुरीको यात्रामा जान सकिनेछ । सम्पत्तिले कार किन्न सक्छ। जीवनमा सुख-सुविधाको वृद्धिले तपाईलाई खुशी र आराम दिनेछ। ब्यक्तिगत जीवनमा खुशी रहनेछ। अविवाहितले जीवनसाथी पाउन सक्छन् ।